Atleta 10 Avy Aminà Firenena Efatra Handray Anjara Amin’ny Lalao Olimpika Ambany Faneva Tokana: Mpitsoa-ponenana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Jolay 2016 5:35 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, Deutsch, Français, русский, عربي, srpski, English
Amin'ity taona ity, ho voalohany hatrizay hampiantrano ekipanà mpitsoa-ponenana ranoray ny Lalao Olaimpika izay hatao any Rio de Janeiro. Misy atleta lehilahy enina ary vehivavy efatra ilay ekipa, izay nitsoaka an'i Sodana Atsimo, ny Repoblika Demokratikan'i Kongô, Syria sy Etiopia. Hifaninana ao amin'ireo lalao izy ireo, ary hiditra amin'ny lanonam-panokafana eo amin'ny Kianja Maracana eo ambany saina Olaimpika.
Rami Anis, 25 taona, sy Yusra Mardini, 18 taona, mpilomano roa avy any Syria izay handray anjara ao amin'ny ekipan'ireo mpitsoa-ponenana.
Nitsoaka ny tanàna fonenany tany Damaskaosy i Yusra sy ny rahavaviny ny Aogositra 2015, nihazo an'i Libanona sy Torkia aloha, izay nanakaramany mpampiampita mba hiampitàna ny ranomasiana Egée ho any Gresy sy hitady fialokalofana tany Eorôpa. Araka ny tantara avy tamin'ny radio Amerikana NPR tsy mitady vola, nanomboka nampidi-drano ilay sambokely nampiampita azy ireo, ka lasa nitsambikina tao anaty ranomasina i Yusra sy ny rahavaviny, izay samy mahay milomano tsara, mba hampitsingevana tsara ilay sambokely efa hilentika. Taorian'ny naha tao anaty rano azy ireo nandritra ny adiny telo sy sasany, tonga tao amin'ny nosy Lesbos ihany ny farany izy ireo.
Tao aminà lahatsary navoakan'ny IOC, nilazalaza ny fiofanany farany tany Syria toy izao i Yusra “mijery ambony eny amin'ny tafon'ny dobo filomanosana ary mahita ny lanitra avy amin'ireo lavaka vokatry ny baomba, .”
Popole Misenga, 24 taona, sy Yolande Mabika, 28 taona, nangataka fialokalofana tany Brezila raha tonga tao amin'io firenena io tamin'ny Fifaninanana Maneran-tany amin'ny taranja Judo tany Rio ny taona 2013.
Samy avy tany Bukavu any atsinanan'ny Repoblika Demokratikan'i Kongô izy roa, toerana izay mbola mitoetra hatrany ny herisetra sy ireo fanitsakitsahana ny zon'olombelona na efa tapitra aza ny Ady Faharoan'i Kongô.
Samy nilaza izy roa ireo fa samy niharan'ny fitondràna ratsy nataon'ny mpampiofana azy ireo rehefa miverina any Kongô isaky ny resy tamin'ny fifaninanana. Araka ny lazain'izy ireo, nohidiny tao amin'ny toerana iray izy ireo ary noferana ny sakafo nohaniny.
Nandritra ny 30 volana, nanosika ireo mpitsoa-ponenana an-hetsiny hifindra any amin'ireo firenena mifanila aminy ny Ady an-tranon'i Sodana Atsimo. Fa voafidy hanjohy ny ekipan'ny mpitsoa-ponenana ireo Sodane atleta dimy tsara vintana, nipetraka tany Kenya.
Nizara tantara mampihoron-koditra mikasika ny fitsoahany, ny hanohanana, ary ny fijaliana amin'ny maha-mpitsoa-ponenana izy ireo. Nilaza izao tao amin'ny Radio Tamazuj, mpanome vaovao isanandro mahenika an'i Sodana Atsimo, i Yiech:
Mpihazakazaka lavitrezaka Yonas Kinde, 36 taona, ho ao amin'ny Ekipa Olaimpikan'ny Mpitsoa-ponenana ao Rio ihany koa ny taona 2016, raha nitsoaka an'i Etiopia . Niaina dimy taona tao Luxembourg izy, nianatra teny frantsay matetika ary nitondra fiarakaretsaka mba hahazoana vola hiainana.
Manao fanazarantena indroa isanandro izy mba hiomanana amin'ireo lalao. “Handray anjara amin'ny Lalao Olaimpika aho. Hirehareha aho. Ho faly aho,” hoy i Kinde tamin'ny mpanao gazety avy tamin'ny vohikala ofisialin'ny Lalao Olaimpika. Mbola hitany fa sarotra aminy ihany ny miresaka ny antony nandaozany an'i Etiopia.
Fa tsy vaovao tsara foana akory ny an'ireo mpitsoa-ponenana any Brezila. Miasa ny governemanta tetezamita, raha ny Filoha voafidy Dilma Rousseff, izay miandry ny fitsaràna azy farany ho amin'ny fanesorana azy amin'ny toerany, nanambara fa hampiato ireo fifanarahana rehetra nifanaovana tamin'ny Vondrona Eorôpeana izy mikasika ny fametrahana indray ireo mpitsoa-ponenana ao amin'ny firenena.
Kanefa, herinandro vitsy tsy ho tonga amin'ny Lalao Olaimpika, nandray tsara ny ekipa mpitsoa-ponenana i Brezila, hoy i Mario Cilenti, talen'ny Kaomitin'ny Lalao Olaimpika Nasionaly 2016 sy ny Tànana Olaimpika any Rio :